Ku dar kood ka badan afar lambar Apple Watch kaaga | waxaan ka imid mac
Mid ka mid ah xulashooyinka aan ka heli karno Apple Watch si aan nafteena uga ilaalinno gelitaanka aan la rabin waa in lagu daro erayga sirta ah ee dheer, oo leh in ka badan afar lambar oo ay ku darayso asal ahaan. Waynu cadahay inay u ekaan karto waxoogaa caajis ah in lagu daro lambaro badan Apple Watch furaha sirta ah, laakiin ka fikir taas Waxaad gelisaa erayga sirta ah hal mar maalintii ugu badnaan laba jeer Miyaanay kula ahayn inay u qalanto?
Hagaag, haa waxaad tahay mid ka mid ah kuwa doorbidaya inay afar lambar ku yeeshaan erayga sirta ah ee Apple Watch sababtoo ah uma baahnid inaad sii waddo akhrinta casharkan yar, kuwa raba inay beddelaan tan iyo ku dar hal dhibic oo kale oo ilaalin ah saacadaheena waa inaan raacnaa dhowr tillaabo oo fudud.
Waxa ugu horreeya waa in laga galo Settings ka saacadda lafteeda. Haa, wakhti dheer inta badan ficilada ayaa laga soo qaaday saacadda lafteeda iyo iPhone ma aha lagama maarmaan. Markaa waanu galnay Settings> Code iyo calaamad ka saar "Simple Code" ikhtiyaarka. Hadda waa inaan galnaa erayga sirta ah ee Apple Watch ee afarta nambar ka kooban ka dibna laba jeer geli kan cusub.
Iyadoo tan horeba wax walba waa la habeeyey oo diyaar u ah marka xigta ee aan ka qaadno saacadda Tani waxay ina waydiinaysaa furaha koodka dheer ee maaha mid afar-god ah sidii hore. Dareenkan, ilaalintu way weyn tahay waxayna faa'iido u yeelan kartaa isticmaaleyaal badan haddii aysan ahayn dhammaan, had iyo jeer way fiicantahay in la helo isku-dar kood ka badan afar lambar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Ku dar koodh ka badan afar lambar Apple Watch-kaaga